Ixesha kunye nabahlobo 30
Kunokwenzeka. Omnye umntu othe waphumelela kuloo mgca impumelelo ebalaseleyo kwaye yaziwa ngokubanzi nguLuther Burbank waseSanta Rosa, eCalifornia. Umnumzana Burbank okwangoku, okwangoku, ngokwendlela esazi ngayo, waqala ngohlobo olupheleleyo nolwintsha, kodwa akukho nto inokumthintela ekwenzeni oko ukuba uyaqhubeka nomsebenzi wakhe. Ukuza kuthi ga ngoku, ukuza kuthi ga ngoku, njengokuba sisazi, iinzame zakhe ziye zajoliswa ekunqumeni iintlobo ezithile zeziqhamo nezityalo, ukuvelisa hayi uhlobo olwahlukileyo ngokupheleleyo, kodwa umntu eneempawu zombini okanye enye yezi zimbini okanye iintlobo ezininzi ezisetyenziselwa kuphuhliso olutsha. Iiakhawunti ezininzi zipapashiwe ngomsebenzi ka Mnu Burbank, nangona kusenokwenzeka ukuba khange axelele konke akwaziyo kwaye konke akwenzayo, ukufezekisa impumelelo eyeyakhe. Unike inkonzo engenakufikelelwa emntwini: uthathe izinto ezinje ngokuzingenakunceda nezingavakaliyo kwaye wazihlakulela zaba zitshizi eziluncedo, ukutya okunempilo okanye iintyatyambo ezintle.
Kuyenzeka ukuba kuphuhliswe nayiphi na imifuno, isityalo, iziqhamo, okanye intyatyambo, enokuhlanjwa yingqondo. Into yokuqala eyimfuneko yokuhlakulela uhlobo olutsha: ukukhulelwa. Ukuba ingqondo ayinakho ukukhulelwa uhlobo olutsha, loo ngqondo ayinakukhulisa enye, nangona ngokujonga kunye nokusebenzisa inokuvelisa iintlobo ezintsha zezidala. Umntu onqwenela ukuyila indalo entsha kufuneka acingisise kakuhle ngohlobo lwentlobo ebeya kuba nalo, aze ke acoce nzulu ngokuzithemba. Ukuba unokuzithemba kwaye uya kusebenzisa ingqondo yakhe ngenkuthalo kwaye angavumeli ukucinga kwakhe ukuba kuzulazule kwezinye iindidi okanye ukuzibandakanya nokuzonwabisa okungenanto, kodwa uya kucinga kwaye acingisise ngohlobo olo aza kuba nalo, emva kwexesha, uya kumitha ingcinga eya kumbonisa udidi alufunayo. Obu bungqina bokuqala bokuphumelela kwakhe, kodwa akwanelanga. Kuya kufuneka aqhubeke ecinga ngale nto ayithathileyo aze acinge ngomonde kuleyo ingcinga ngaphandle kokuzulazula kwabanye. Njengoko eqhubeka nokucinga, ingcinga iya kucaca kwaye indlela yokufumana indalo emhlabeni kufuneka icace. Okwangoku, kufuneka azimisele ukusebenza kunye nezo ntlobo zikufuphi nale nto acinga ngayo; ukuziva kubo; Ukwazi intshukumo ezohlukeneyo kwaye ube nemfesane kwaye ubethe ngokufunxa kwesityalo esihamba kwimithambo yethambo kunye nemithambo, ukuziva ukuthanda kwayo kunye nokubonelela, ukuwela izityalo azikhethileyo kwaye emva koko ucinge iintlobo zayo ukuba zingene ukuwela, ukuyiva ikhula kwiintlobo ezimbini azinyulileyo, nokuyinika isimo somzimba. Ayifanelanga, kwaye ayiyi kuthi, ukuba sele ihambile ukuza kuthi ga ngoku, idimazeke ukuba ayiboni kwangoko iintlobo zayo ezintsha njengemveliso. Kuya kufuneka izame kwaye izame kwakhona kwaye njengoko eqhubeka nokuzama uyakuvuya ekuhambeni kwexesha ukubona uhlobo olutsha luza kubakho, njengoko kuyakwenza ngokuqinisekileyo ukuba wenza indima yakhe.
Umntu oza kuzisa udidi olutsha ekubeni alazi kancinci malunga ne-botany xa eqala, kodwa kuya kufuneka aziqhelanise nakho konke anokufunda kulo msebenzi. Zonke izinto ezikhulayo zinemvakalelo kwaye umntu kufuneka azive kunye nabo kwaye azithande, ukuba angazazi iindlela zabo. Ukuba angakufumana okona kulungileyo kubo, kufuneka abanike okona kulungileyo banako. Lo mthetho ubambe intle kuzo zonke izikumkani.